I-China 6061-T651 Aluminium Sheet Umkhiqizi kanye Nomthengisi | URuiyi
I-6061-T6 ingelinye lama-alloys ochungechunge lwe-aluminium asetshenziswa kakhulu angama-6000. Ama-aluminium amashidi angama-6000 anikeziwe afaka phakathi i-6061 ne-6082 chungechunge. Ngokuqondile, ishidi le-aluminium le-6061 lungumkhiqizo omele phakathi kwalolu chungechunge. Isithako esiyinhloko salolu chungechunge lwe-aluminium ishidi lifaka izinto ze-magnesium ne-silicium. Inezici zombili zochungechunge lwe-4000 no-5000.
Imininingwane ye-6000 Aluminium Sheet
♦ Ingxubevange: 6061 6063 6082 6A02 njll.
Ick Ubukhulu: 0.2-150mm
Ick Ubukhulu (mm): 0.6-5.0mm
Ububanzi (mm): 100-1800mm
Isitifiketi se-:: ISO9001, MSDS, SGS
6061-T651 Aluminium Ishidi - (ASTM B209, QQ-A-250/11) Inikeza inhlanganisela yamandla akhuphukile, ukumelana nokugqwala, kanye nokusebenza ngemishini okwenza ibanga le-aluminium elisetshenziswa kakhulu. I-6061 Aluminium Sheet iyelapheka ngokushisa, imelana nokuqhekeka ngenxa yengcindezi, kulula ukuyishisela nomshini, kepha kukhawulelwe ekumeni kahle. I-6061 Aluminium Sheet ilungele ukwakhiwa kwesakhiwo, amapuleti ayisisekelo, i-gussetts, isithuthuthu nezingxenye zezimoto, njll.
Okungewona amandla kazibuthe, i-Brinell = 95, iTensile = 45,000, Isivuno = 40,000 (+/-)
Ubukhulu Bamasheya Abutholakalayo: 1ft x 1ft, 1ft x 2ft, 1ft x 4ft, 2ft x 2ft, 2ft x 4ft, 4ft x 4ft, 4ft x 8ft, 4ft x 10ft noma Sika Usayizi noma Umumo Wokwezifiso.
Izici ze-6000 Series Aluminium Sheet
Is Luhlobo lweshidi le-aluminium elingafakwa ngokwelashwa okubandayo. Ngalokhu, ingasetshenziswa ezimeni ezinesidingo esikhulu sokulwa nokugqwala kanye ne-oxidation.
A Njengomphumela wokutholakala kwayo okuhle nesixhumi sayo esinezici ezinhle, siboshwe kalula futhi sinokusebenziseka okuhle.
♦ Ifanele ukucutshungulwa okuqhubekayo kokugoqwa kwezindonga nodonga lwamakhethini
♦ Lolu chungechunge lwe-aluminium sheet lungasetshenziselwa ukucubungula izingxenye zendiza, izingxenye zekhamera, ama-couplers, izingxenye zemikhumbi, i-hardware, izesekeli ze-elekthronikhi namajoyinti, ama-valve nezingxenye ze-valve, njll.
Siphinde futhi sihlinzeke nge-aluminium sheet, ikhoyili yokusika i-aluminium, ipuleti engu-5 bar aluminium tread, umugqa we-aluminium, ikhoyili ye-anodizing aluminium, ipuleti yedayimane aluminiyamu yokunyathela, ikhoyili ye-aluminium, nokuningi. Ngeminye imininingwane nganoma yimiphi imikhiqizo yethu, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi ngenombolo yocingo noma nge-imeyili enikezwe kuwebhusayithi yethu.
Njengomkhiqizi nomhlinzeki weshidi le-aluminium lase-China, siphinde sikhiqize ikhoyili ye-aluminium eboshwe, ipuleti le-aluminium, ikhoyili ye-aluminium, umugqa we-aluminium, ishidi le-aluminium anodizing, ishidi le-aluminium embossed, njll. zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi ngqo
Langaphambilini 3003 Aluminium Diamond Nyathela Plate
Olandelayo: I-Aluminium Checkered Plate